Nisy tamin’ireo mponina mihitsy no traboina raha tokantrano roa ankehitriny no tandindomin-doza, izay tena manakaiky io lalana rarivato mihotsaka io. Tonga nihaino ny fitarainan’izy ireo teny an-toerana ny minisitry ny kolontsaina sy ny serasera Rtoa Rakondrazafy Lalatiana Andriatongarivo ny sabotsy teo nandritra ilay hetsika asa tagnamaro andiany fahenina nokarakarainy. Fantatra tamin’izany fa asa tagnamaro aloha no hanombohana ny asa fanarenana ity lalana tapaka etsy Soanierana ity. Hitohy amin’ny fandraisan’ireo teknisianina sy injeniera ny asa izany izay haharitra roa volana eo ho eo. Tsy maintsy hatao beton aloha, hoy ny minisitra ary aorian’izay vao azo hatomboka tanteraka ny asa fanamboarana. Tsiahivina fa ankoatra ity fijerena ny lalana tapaka eny Soanierana ity dia nodiovin’izy ireo niaraka tamin’ny sampana mpamonjy voina ihany koa ireo toerana takontakona fanaovan’ny mponina maloto rehetra eny Analakely toy ny eny Ambodifilao, Tsaralalana.
Legende : Ho vita tsy ho ela ity lalana tapaka eto Soanierana ity